ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မေခ-မလိခ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းများနေ့ အခမ်းအနားကို တွေ့ရစဉ်။
မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အလျှင်အမြန် ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရသစ်ကို တွန်းအားပေးမယ်လို့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာမယ့် အစိုးရအဖွဲ့သစ်မှာ သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ကျင်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့ စိမ်းလန်းအမိမြေ (Eco Dev) အဖွဲ့က အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းမျိုးသူကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား တာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အစိုးရ​သစ်​​တောင်​ ထိုင်​ခုံမှာ မထိုင်​ရ​သေးဖူး မ​အောင့်​နိုင်​
မ​နေနိုင်​​လောက်​​အောင်​ သူကိတ်​စ သူအကျိုးကြီးပါလား
ဒါ​ကြောင့်​လည်း မြန်​မာပြည်​သူအားလုံးက တရုတ်​ဆိုတာနဲ့ အရမ်းအရမ်းက်ု ချစ်​ကြတာ။
Mar 21, 2016 08:34 AM
We would not accept to continue to proceed this dam project and should be totally cancelled as possible. Please keep up and maintain our home land and river.
We like to insist to the new NLD Gov, to stop the project.
If could not cancel pls make delay and hold the time.
Behalf of Myanmar people.
NLD အစိုးရ တက်ရင် အုပ်ချုပ် လို့ မရအောင် ပြည်သူကို ကတိ ပေးထားတာတွေ ကို အပြည့်အ၀ မလုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားတာ အမျာကြီးပဲ။ အုပ်ချုပ်ရေး ရဲ ဌာန ဆိုင်ရာ အသီသီး မှာ မိုးကျရွှေ ကို တွေ ခန့် ထားတယ် တရားရေး ကို စစ်ဗိုလ် ၀န်ကြီးအောက်မှာထားတယ် စည်ပင်ပိုင်နိုင်ငံ ပိုင် မြေတွေ ကိုတပ်ပိုင် ဦးပိုင် ပိုင်တွေ လုပ်ပြစ်တယ် ဘယ်အချိန်က တပ်ကပိုင် ဦးပိုင် က ညပိုင် သွားမှန်း တန်ဘိုး ရှိရှိပေးမှန်းလည်း မသိဘူး။ ဥပမာ ဦးစန်းယု က စည်ပင်ပိုင်မြေထဲမှာ သူ့ အိမ်တော် ၀န်ထမ်းတွေ ထား ထားတာ ခုတော့ ဦးပိုင်မြေ ဆိုပြီး ရောင်းစားတာလဲ သိန်း ၅ သောင်းကျော်ရ တယ် ဆိုပဲ။ အဲဒီ ဈေးပေးဝယ်တာက ဘယ်သူလဲ ဒီလောက် ငွေ အများကြီး ဘယ်လိုရှိတာလဲ။ ပုဆိုးပြောင်းဝတ် အစိုးရ မလုပ်ခင် လုပ်ငန်း ကြီးကြီးမားမား အားလုံး ကို ဦးပိုင် ဆိုပြီး သိမ်းယူလိုက် လို့အစိုးရ သစ် ပြည်သူ အတွက် လုပ်ပေးစရာ မကျန်တော့ ပါဘူး။ မအလ က နောက် ၅ နှစ် ဒီ အတိုင်း မပြောင်းဘူး ဆိုတော့ ပြည်သူတွေ NLD ကို နောင် တစ်သက်လုံး ဆက်တင်ထားမှ ရမယ်။
Mar 18, 2016 01:52 AM
တရုတ်အစိုးသည် NLDအစိုးရအား ယခင် အစိုးရများပုံစံများအတိုင်း ဆက်ဆံပီး ဖိအားပေးပုံစံလုပ်လို့ မရပါ။ဘာကြောင့်လည်း
ဆိုရင် အမေစုအစိုးရသည်တရုတ်အစိုးရနှင့် မည်သည့်အပေးအယူများမရှိခဲ့သလို အမေစု အစိုးရနောက်တွင် အမေရိကန်ဂျပန်အပါ
ကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒါကြောင့် တိုင်းတာလို့ရသည့် စီးပွားရေး အကျိုးမြတ်တခုထဲ ကိုမကြည့်ပဲ နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် တိုင်းတာ၍မရသည့် မြန်မာပြည်သူများ ၏ဆန္ဒကို အလေးထား သည့် သဘော ထားကြီး သည့် ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုသည့် နံမည်ကောင်း ကိုယူသင့်ပါသည်။
နေရပ်- ပြည်သူများက ဝမ်းသာကြပါမည်
မြန်မာပြည်သူများကတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် အလားတူပြည်သူ့ ဆန္ဒထောက်ခံမူမရှိသည့် စီမံကိန်းများကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းရန်ဆန္ဒပြင်း
ပြပါသည်။NLDအစိုးရသည်လည်း ယင်းကိုသိပါသည်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများ အားလုံးဝမ်းသာစေမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ